Coin, Vending, Ary Machine Servicers fialam-boly sy ireo mpanamboatra Job Description / Duty Sample Ary Jobs - JobDescriptionSample.org
Home / Uncategorized / Coin, Vending, Ary Machine Servicers fialam-boly sy ireo mpanamboatra Job Description / Duty Sample Ary Jobs
Jacob Jona 28, 2016 Uncategorized 2 Comments 1,821 Views
Services, tendrombohitra, hamerina ny vola, sakafo maivana, na ny voly milina anisan'izany ny lalao video, juke boaty na ny slot milina, na hanitsiana.
Career Skills Fepetra
Fenoy milina mampiasa zavatra, entana, vola, ary koa ny fitaovana hafa.
Foana firaketana an-tsoratra ny zavatra omena sy ny dolara nangonina.
Mahazo vola sy ny vola lany avy amin'ny vokatra, manomana kaonty, ary hampihavana firaketana an-tsoratra amin'ny concessionaires.
Ho orinasa dia miantso mba naharitra foana ka hamerina modely.
Fepetra sy hizaha ohatra mba hahafantarana mahatonga ny tsy fahombiazana sy manamboatra olana kely ohatra tratra feno vokatra na ny vola lany.
Fitaovana izay hadinina mba hahafantarana tsara fandidiana.
Contact fanamboarana tehina izay hafa na vola fa noho ny fanesorana ny fitaovana ao amin'ny tranga misy fanamboarana izay fanalahidy ilaina.
Clear sy menaka fitaovana singa.
Record fividianana ahalalan-tahirin-kevitra eo amin'ny karazana na ny hazo, ary mailo nomena mpiasa ny mifanohitra.
Manova ny fitaovana sy ny endri-javatra force thermostats.
Arovy tahirin-kevitra ny hamerenana amin'ny laoniny sy ny fiarovana tarika.
Hanova malfunctioning singa, andriamby anisan'izany nampiasa saina amin'ny fitaovana mandeha ho azy Teller (ATM) karatra mpamaky.
Hanova ka hampody ny fepetra sy ny vola madinika, merchandising, na ny fialam-boly sy ny fitaovana ara-teknika sy hanova malfunctioning faritra herinaratra, -tanana ny fampiharana fitaovana, soldering vy, sy ny kisary.
Appliance fikojakojana dia ilaina ny get singa.
Disassemble fitaovana, araka ny fepetra arahana sy mampiasa tanana sy ny hery fitaovana.
miisa fitaovana, fanaovana ny rano sy ny herinaratra ilaina ny fifandraisana eo amin'ny nankatò mampiasa zavatra takiana.
Maka hevitra amin'ny wiring sy boky kisary mba hanangona Info nanana ilaina ny manamboatra vokatra.
Transport modely ho fametrahana tranonkala.
Ho fanamboarana vidin'ny vinavina.
Tsy maintsy Career Activities
Fahalalana-fahalalana ny mamaky fehezanteny sy namorona fehezanteny mifandray amin'ny asa-taratasy.
Active-mihaino fanatitra feno tsara ny zavatra hafa-olona hoe, mahazo fotoana ho anareo mba hahatakatra ny zavatra natsangana, manontany tena fanontaniana marina, ary na oviana na oviana-dratsy fanotofana amin'ny fotoana.
Manoratra-Mampita soa aman-tsara amin'ny taratasy ho mety ny zavatra ilain'ny mpihaino.
Miteny--miresaka amin'ny hafa mba hizara vaovao mahomby.
Matematika-Mampiasa matematika mba hamahana olana.
Science-pitsaboana Mampiasa fitsipika sy teknika mba hanarenana ny olana.
Critical-misaina-Mampiasa fitsarana ka nikasa hamantatra ny tombontsoa sy ny fahalemena amin'ny Alternate valiny, hita na ny fomba Miteraka.
Active-Learning-fahatakarana ny soa azo avy amin'ny vaovao izay ho avy vaovao ho an'ny tsirairay sy vao haingana hamaha olana-fanapahan-kevitra sy ny.
Ny fianarana Fomba-fifantenana sy mampiasa fomba coachingORinstructional sy fitsaboana mendrika ny toe-draharaha, rehefa mianatra na zavatra mpanazatra vaovao.
Nanamarina-TrackingPEREvaluating fanatanterahana-tena, olona izay hafa, na orinasa mandray dingana fanitsiana na mamokatra fiovana.
Social fidirana-Tsy Mahalala Tsara hafa’ fironana sy ny fahafantarana ny antony mitondra tena raha manao.
Fandrindrana-manova hetsika amin'ny resaka hafa’ fiaraha-mientana.
Marketing-Mandresy lahatra ny hafa manova ny fihetsika na ny eritreriny.
Fanelanelanana-Mitondra ny hafa miaraka sy miezaka ny hampihavana fahasamihafana.
Manampy ny hafa-Mampianatra ny fomba tena hanao zavatra.
Service Orientation-mitady fomba mavitrika ny hanohana olona.
Complex Problemsolving-manavaka olana be pitsiny sy nandinika tahirin-kevitra izay mifandray amin'ny hanangana ka mba diniho safidy sy mampihatra vahaolana.
Asa Analysis-mandinika sy ny vokatra dia mitaky fepetra arahana mba hanao fisehon'ny.
Injeniera Design-Engineering hanampy tsirairay sy ny trano na ny fametrahana fitaovana mitaky.
Gear Selection-fitaovana sy ny Famantarana ny karazana fitaovana ilaina hanao asa.
Fametrahana-Manampy fitaovana, entana, cabling, na ny fangatahana mba hanatanteraka endri-javatra.
Programming-Manoratra solosaina fampiasana fonosana ho an'ny isan-karazany.
Tracking-Mahita asa samy hafa hita, antso, na gauges mba hahazoana antoka ny fitaovana dia miasa araka ny tokony ho.
Ny asa sy hitantana-teknika manazava asan'ny na fitaovana.
Fitaovana Maintenance-manome fikojakojana izay fahazarana eo amin'ny vokatra sy mamantatra raha ary inona no miasa eo ho ilaina.
Fanamboarana antony ao ambadiky ny fanapahan-kevitra-glitches izay miasa sy mifidy izay lalana mba mandehandeha na dia iray akory izany.
Indray-teknika indray mampiasa fitaovana na ny fomba ilaina.
Quality-Control Analysis-manome fanaovana fitiliana sy ny fanombanana ny entana, orinasa, na miasa mba hijerena miasa na tsara.
View sy ny fandraisana fanapahan-kevitra-nieritreritra mikasika ny tombontsoa sy ny vola lany amin'ny fepetra ankapobeny izay mety ho ny mifidy ny iray izay no tsara indrindra mifanaraka.
Systems Analysis-manapa-kevitra ny fomba fomba iray dia tsy maintsy miasa sy ny fomba fiovana eo amin'ny toe-javatra, asa, ary ny rivo-piainana mety hisy fiantraikany soa.
Systems Analysis-Famantarana dingana na ny famantarana ny fampisehoana, ary koa ny mikasika ny lasibatry ny rafitr'ity tontolo ity, ny dingana nanana ilaina ny hanatsara na mety fahombiazany.
Time Management-mifehy oneis fotoana manokana.
Fitantanana ny tahiry-manapa-kevitra ny fomba vola mety ho lany mba hahazoana ny asa tanterahana, sy ny varotra mikasika ireo sarany.
Asa ny Fidorohana Fomba-nahitany sy ny fitadiavana ny mety fampiasana ny orinasa, Fitaovana, sy ny fitaovana ilaina mba hanao asa manokana.
Fanaraha-maso ny mpiasa Resources-Fanorenana mampahery, sady mitondra olona satria izy ireo miasa, pinpointing ny tsara indrindra ho an'ny olona ny fibodoana.
Training fahaizana Experience Mila
High School Level (na GED na High School Senior Equivalence Certificates)
Training School Maro
Job Management Skills fepetra takiana mialohan'ny ahafahana
fikirizana – 79.81%
antony manosika – 88.12%
Leadership – 88.68%
Fiaraha-miasa – 89.30%
Matter ny hafa – 83.92%
Fahafehezan-tena – 83.98%
Pressure tokonam-baravarana – 88.00%
Customization / mivezivezy – 93.64%
mendri-pitokisana – 89.34%
Tsara Lalina – 97.59%
manao ny marina – 89.16%
Freedom – 96.00%
famoronana – 88.04%
mieritreritra – 93.95%
Momba an'i Jakôba